Site n’otú ndị na - azụ ihe si ele ihe anya, ndị ahịa anyị na - amata ụlọ ọrụ anyị n’ebe nile
1 Ịkwọ Ọma, ụlọ ọrụ ahụ nwere ìgwè ndị ọkachamara nke ndị na - edepụta ihe, ndị ọkà mmụta nwere ahụmahụ na ngwá ọrụ ndị na - azụ n’ọrụ. O nwetawo ahụmahụ dị ukwuu n’ahụ́Ụlọ ụgbọ mmiri a na - akọ, Karịsịa lekwasị anya n’azụ nke ọgụgụ a na - arụ ọrụ.
2 、 Ụba: ụlọ ọrụ ahụ enwewo ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, ikike a na-azụ ahịhịa, ego dị nta nke ịzụ ihe na ụgbọ mmiri na njem, na ego a na - efu, Ya mere, a na - eri ụgwọ a na - arụ n’ebe a na - eri nri na - asọ mpi.
3 Iji nzuo mkpa ndị ahịa a na - eme, ndị ọzọ na - arụ ọrụ apụghị egbochi mkpa ndị ahịa, Ma, ụlọ ọrụ pụrụ ịhụ mkpa ndị ahịa a na - eme ka ukwuu, ka ha wee nwee ike ịtụkwasị ndị ahịa obi.
4 i Brand bụ onye na - emepụta ọkachamara na onye na - enye ụlọ ọrụ na - elekwasị anya n’ọdịdị ntụfu ego n’ahụ́. A maara ụdị nile nke ihe ndị a na - achọ n’ahụ́, na ha bụ ndị a ma ama na ụlọ ọrụ a na - emepụta nkịtị Hebei.
5 Ịzụsị a na - ere ya: ụfọdụ ndị na - arụpụta ọkụ na - ere mgbidi a na - akụkụ ụgbọ mmiri, ma e nwere ike ịzụsị ozugbo gaghị adị nnọọ mma. Anyị na - enwe mkpa dị ukwuu n’ebe a na - ere ozu. Ndị na - azụ ahịa pụrụ ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ ahụ kpọmkwem ma ọ bụrụ na ha na - enweta nsogbu ọ bụla n’ime usoro a na - arụ ọrụ. Ụlọ ọrụ ahụ ga - eziga ndị ọrụ pụrụ iche idozi nsogbu ndị ahịa.
Ochie:Olee ihe bụ́ isi a na - eji ákwà e ji akwụsị n’ahụ́?
Ọzọrụ:Ụdị nche nke a na - eme ka a na - egbochi ụkwụ
Mmadụ n’Ụzọ n’Ebe Na - egbochi Echiche na Mmetụta Ụtọ
Ụfọdụ ụkwụ, A na - akpọkwa ọgụgụ mesh, ọdụ a na - akpọ ọgụ ma ọ bụ ụgbọ mmiri a na - achọ ego, bụ ụdị ọhụrụ a na - achọ ya. Ọdịdị ya bụ akụkụ nke gụnyere ụdị egbuke na ụdị gburugburu. Ụdị nkịtị e jikọ...